ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: May 2009
ကျွန်မကို မောင်လေးတလနွန်ရယ်၊ မောင်လေးကိုရဲရယ်က ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီနဲ့တဂ်ထားတာပါ ... သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ပို့စ်ရေးချင်နေပေမယ့် အလုပ်ကြောင့် အာရုံတွေနောက်နေလို့ ရေးဖို့ ဘယ်လိုဈာန်မ၀င်ဘူးဖြစ်နေတာ ... ခုတော့ တဂ်ပို့စ် နှစ်ခုလုံးကို ပို့စ်တစ်ခုတည်းမှာပဲပေါင်းရေးလိုက်ပါတယ်နော ....
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ခင်မင်ရသော မောင်လေး တလနွန်က တဂ်ထားတာပါ … ရေးဖို့စဉ်းစားတိုင်း ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာပြန်ပြန်တွေးနေတာနဲ့ပဲ မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာ …
ခုချိန်ထိရည်းစားမထားဖူးဘူးဆိုရင်လည်း ယုံကြမယ်မထင်သလို၊ ကျွန်မကလဲ အဲ့လိုမညာချင်ဘူးရယ် … ဒါပေမယ့် ရည်းစားတော့ တကယ်မထားဖူးဘူး … ချစ်သူတော့ထားဖူးတယ် …း) ချစ်သူနဲ့ရည်းစားဘာကွာလို့လဲဆိုရင်တော့ ကျွန်မသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကွာခြားချက်က ရည်းစားဆိုတာ အပျော်၊ ချစ်သူဆိုတာအတည် … အတည်တော့ထားခဲ့တာပါပဲ … ဒါပေမယ့် အကြောင်းမသင့်တော့လဲ မပေါင်းဖြစ်ဘူးပေါ့ … ဘယ်နှစ်ယောက်ထားဖူးလဲဆိုတာထက် ကျွန်မဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ဘူးတဲ့ ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် …
ပထမဆုံးတစ်ယောက်က ကျွန်မထက် အသက်နှစ်နှစ်ကြီးသော ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းပါ …
သူကကျွန်မကို သိပ်ချစ်တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုလဲကျွန်မ နှစ်နှစ်ကာကာပြန်ချစ်သွားပါတယ် .. ကျွန်မထားခဲ့ဖူးတဲ့အထဲမှာ ချစ်သူသက်တမ်းအကြာဆုံးသူတစ်ယောက်ပါ … သူကစိတ်ကောင်းဝင်ရင် ကျွန်မကို “ကလေး” လို့ခေါ်လေ့ရှိပြီး .. များသောအားဖြင့်တော့ နာမည်ရှေ့မှာ “ဒေါ်” တပ်ပြီးခေါ်လေ့ရှိပါတယ် … သူနဲ့ကျွန်မနဲ့အကြောင်းကို ဒီမှာ ရေးဖူးပါတယ် …
ဒုတိယတစ်ယောက်က ကျွန်မထက် တစ်လသာကြီးသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါပဲ … ချစ်သူမကျ၊ သူငယ်ချင်းမကလို့ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့ …. ကျွန်မကို သိပ်နားလည်လွန်းသော၊ ကျွန်မဘ၀မှာ မမေ့နိုင်သော၊ ကျွန်မအချစ်ရဆုံးသော ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပြပါဆိုရင် သူ့ကိုပဲပြရမှာပါ …. သူကတော့ ကျွန်မကို “ဖိုးအိလေး” လို့ခေါ်လေ့ရှိတယ် … သူနဲ့အကြောင်းကိုတော့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လိုရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ် …
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ “ထားခဲ့ဖူးသောရည်းစားများ” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲ မောင်လေးကိုရဲကိုရေးပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် ...
၁။ ကျွန်မကိုတဂ်ထားသော မောင်လေးကိုရဲ
ကျွန်မနဲ့သူနဲ့က ဘလော့ပေါ်မရောက်ခင်ကတည်းက ning ဆိုဒ်တစ်ခုမှာရင်းနှီးခဲ့တာပါ … ကျွန်မကို တခါတလေ အလွန်နားလည်ပေးတတ်ပေမယ့်၊ တခါတရံ ဂျစ်ကန်ကန် ဘုကျကျတွေဆက်ဆံတတ်သော ကျွန်မသိပ်ခင်တဲ့မောင်လေး တစ်ယောက်မို့ပါ ….
တစ်နေ့မှာ “ငါတို့တိုင်းပြည်လေးမှာ” ဆိုတဲ့ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါတဲ့မေးလ်တစ်စောင် ကျွန်မစာတိုက်ပုံးထဲကို ၀င်လာပါတယ် … ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်မိတော့ ကျွန်မအရမ်းသဘောကျသွားပြီး လင့်ခ်လေးလဲပါတော့ သူရေးတဲ့ကဗျာတွေ ဘာတွေများရှိဦးမလဲဆိုပြီး ဖတ်ချင်လာတာနဲ့ လိုက်သွားပါတယ် .. ကျွန်မ ပထမဆုံးဖတ်ဖြစ်တဲ့ဘလော့က ဆိုးသွမ်းရဲ့ဘလော့ပါ … တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်မှ ဒီဘလော့ကိုမကြည့်ရရင် မနေနိုင်အောင်ကိုဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခုပါ … သူရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီး သူ့ကိုတွေ့ချင်မိပါတယ် …
၃။ ကိုဝင်းဇော်၊ နေမင်းသံစဉ် ၊ မောင်မျိုး
ကျွန်မစာတွေစရေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မဘလော့ကို အမြဲလာဖတ်ပြီး ကျွန်မအတွက် ကွန်မန့်တွေပေးခြင်းဖြင့် အသစ်တွေရေးဖို့ အားအင်တွေပေးတဲ့ အမြဲတမ်းစာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့လို့ သူတို့ကိုလဲ တွေ့ချင်မိပါတယ် …
ကျွန်မက ကဗျာတွေကို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်မို့လို့ ကဗျာရေးတဲ့ဘလော့တော်တော်များများကိုလဲ လည်ပြီးဖတ်ဖြစ်ပါတယ် … ဘ၀ကဗျာတွေရေးတဲ့နေရာမှာရယ် .. ကဗျာထဲက စကားလုံးသုံးတဲ့နေရာမှာရယ် သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ ခဏခဏ မွှေနှောက်ဖတ်မိတဲ့ဘလော့လေးတစ်ခုပါ … ကျွန်မနှစ်သက်သောကဗျာဆရာမို့တွေ့ချင်မိပါတယ် …
ကျွန်မ အွန်လိုင်းပြန်စသုံးတဲ့အချိန်မှာ ပထမဆုံးခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းလေးပါ …. နောက်တော့ သူ့မှာလဲ ဘလော့လေးရှိတယ် လာဖတ်ဆိုတာနဲ့ အသစ်တင်တိုင်းသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ် … သူနဲ့ကတော့ မကြာမကြာလဲ စကားများ ရန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် …
သီချင်းအဆိုကောင်းသော၊ သည်းခံတတ်လွန်းသော ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းလေးပါ …. သူ့ကိုလဲ ဘလော့စမလုပ်ခင်ကတည်းကခင်ခဲ့တာပါ … ခုတော့ သူလဲ ဘလော့မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ ….
Ning ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ကျွန်မရေးတဲ့ပို့စ်လေးကို ကွန်မန့်ပေးရာကနေစခင်ခဲ့ တာပါ … ခုချိန်ထိလဲ ဆက်လက်ခင်မင်နေဆဲ စာရေးကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတစ်ယောက်မို့တွေ့ချင်မိပါတယ် ….
၈ - ၁၀ ။ မချစ်ရ၊ ကောင်းကင်ပြာ၊ မငုံ
မချစ်ရနဲ့တော့ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက သွားတွေ့ပြီးပါပြီ … ပွင့်လင်းသွက်လက်ပြီး ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့သူလေးပါ …
မကောင်းကင်ပြာနဲ့ မငုံကိုတော့ စာရေးဟန်လေးတွေက ပွင့်လင်းရိုးသားပြီး စိတ်ထဲကလဲ အလိုလိုကိုခင်မိလို့မို့ အခွင့်ရမယ်ဆိုရင် တွေ့ချင်မိပါတယ် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 12:46 AM 14 comments Links to this post
ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို အားရင်ရေးပေးပါလို့ မငုံပြောထားတာကြာပေါ့ ….
ခုမှရေးဖြစ်တာတော့ ဆောရီးပါ မငုံရေ …
မသိမသာနဲ့ပြင်သင့်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲရှိတာပေါ့ … သိသိသာသာပြင်သင့်တာလေးတွေး ချရေးကြည့်မယ်နော် …
၁။ အစွဲအလမ်းအရမ်းကြီးလွန်းတာပါ …. အစွဲအလမ်းကြီးလွန်းတော့ ခံစားရတာတွေများတယ်လေ … ကိုယ့်ကိုကိုယ်မကြိုက်ဆုံးအချက်ပါပဲ …
၂။ အပျင်းထူလို့ရသလောက်ထူချင်တာ … ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်တုန်းက လစာတွေတိုးပေးဖို့ Supervisor တွေက Recommend လုပ်ရတယ် … အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ Supervisor က Recommend ကောင်းကောင်းပေးတာကို တခြား Supervisor တွေက Initiation နှေးတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးတာခံရဖူးတယ် … Initiate လုပ်တာမြန်တာဆိုလို့ အဲ့တုန်းက ဂိမ်းဆော့တာပဲ … ကိုယ့်ဘေးထိုင်တဲ့သူက ဂိမ်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်လဲဖွင့်ပြီးသားပဲ …. အဲ့လိုမြန်တာ …
၃။ တခါတလေ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိမှန်းသိသိကြီးနဲ့ လုပ်ချင်ရင် စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဆက်လုပ်တာ … ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် တညလုံးမအိပ်ပဲ ချတ်တာမျိုး၊ ဂိမ်းဆော့တာမျိုး၊ တညလုံး ရုပ်ရှင်တစ်ကားပြီး တစ်ကားကြည့်တာမျိုးတွေပေါ့ …
၄။ နောက်ပြီး ဖုန်းခတွေဈေးကြီးမှန်းသိလျက်နဲ့ ကိုယ်ဖုန်းခေါ်ချင်ရင် Oversea ကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီး ကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ လုပ်ခတွေဖြုန်းပစ်တာမျိုး …..
၅။ အားနာတတ်တာလဲ မကြိုက်ဘူး … တော်ရုံမဟုတ်ဘူး … ကိုယ်က အားမနာသင့်ဘူးလို့တွေးပြီးလုပ်လိုက်မိရင်တောင် တွေးပြီး အားနာတတ်ပြန်သေးတာ .. အဲ့အကျင့်လဲပြင်ရမယ် … မုန်းလွန်းလို့ …
လောလောဆယ်တော့ အပြင်သင့်ဆုံးတွေက ဒီ(၅)ချက်ပဲစဉ်းစားလို့ရသေးတယ် … မငုံကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်နော် ….း)
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:55 AM 12 comments Links to this post
လွန်ခဲ့သော နှစ်ရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကပေါ့ကွယ် ….. ပုံပြောမလို့မဟုတ်ဘူးနော် ….
တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ပြောပြမလို့ …. ဖတ်ပြီးတော့ မရယ်ကြနဲ့ဦး ….
ဆက်ရမယ်ဆိုရင် …. အဲ့ဒီနေ့လေးတစ်နေ့ကပေါ့ … ကြယ်ပြာတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ရထားစီးဖို့အလာမှာ ဘူတာကို ဆင်းတဲ့ စက်လှေကားအရှည်ကြီးတစ်စင်းကနေ ဆင်းလာရောဆိုပါတော့ … ဘူတာနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူးရယ် … ကြယ်ပြာက ဘိနပ်ပါးပါးလေးစီးထားတယ် … ပါးပါးလေးမှ တကယ့်ပါးပါးလေး ….
စက်လှေကားအဆုံးမှာ စက်လှေကားပျက်ရင် ဖွင့်ပြင်ရတဲ့ အံဖုံးလေးတွေရှိတယ်လေ …. အဲ့ဒီအံဖုံးလေးတွေမှာ အဖုံးဖွင့်ဖို့ထားတဲ့ အပေါက်ရှည်မျောမျော သေးသေးလေးတွေနှစ်ခုတောင်ရှိတယ် …. အဲ့ပေါ်ရောက်လဲရောက်ရော ဘယ်ကနေ ဘယ်လို အဲ့အပေါက်လေးထဲကို ဘိနပ်ထိပ်ဦးက ၀င်သွားလဲမသိပါဘူး … ခြေထောက်ကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်သလို တုံ့ကနဲဖြစ်သွားပြီး … ဘိုင်းကနဲပစ်လဲပါလေရော …. “အား ……. ” လို့တောင် မအော်နိုင်ဘူး … အွတ်ခနဲတော့မြည်သွားသလိုလိုပဲ … တော်တော်ရင်နာသွားတယ် … မှောက်လျက်ကြီးလဲလို့လေ …. ဟီး ဟီး … အနားကလူတွေကတော့ အုန်းကနဲ အသံကြီးကြားတော့ လန့်ဖြတ်ပြီး လှည့်ကြည့်ကြတာပေါ့ … ကိုယ်ကတော့ ရှက်တာရော ချက်ခြင်းမထနိုင်တာရောပေါင်းပြီး ကြမ်းပြင်မှာ မှောက်လျက်ကြီး ခဏမှိန်းနေပစ်လိုက်တယ် …. အိပ်လို့တော့ အကောင်းသား … :P
ဘေးက အစ်ကိုကြီးကတော့ ကိုယ်လဲတဲ့ပုံရော ပေပြီးမှောက်လျက်ကြီးကမထတာကိုရော ကြည့်ပြီး ထရမလို ထူရမလို ထိုင်ရမလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ တဟားဟား နဲ့ရယ်ပါလေရောလေ …. မထူနေပေါ့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ထမယ်ဆိုပြီး ထတော့ ဒူကကွေးမရဘူးနာနေတာနဲ့ … ဟီး အဲ့တိုင်းထလိုက်တာ မသိရင် အမ်အာတီလာပြီး ဒိုက်ထိုးနေတယ်တောင် ထင်ကြဦးမယ် …. ဘယ်သူတွေများမြင်သွားမလဲဆိုပြီး နောက်လှည့်ကြည့်တော့ … လှေကားပေါ်မှာ ကုလားအုပ် …. ၁၀ ယောက်လောက်ရှိမယ် … အိုး … ရှက်လိုက်တာ ဆိုပြီးရှေ့တည့်တည့်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ပိုဆိုးသွားတယ် .. စစ်ကျူရတီကင်မရာကြီးက ကိုယ့်တည့်တည့်ချိန်ရက်သားကြီး ….. ဒီလိုမှန်းသိ လဲလဲခြင်းချက်ခြင်းထပါတယ် …. ခုတော့ မှတ်တမ်းတောင်ဝင်သွားသေးတယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:10 AM 13 comments Links to this post
တစ်နေ့မှာ ကျွန်မရယ်၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရယ် အလုပ်ကပြန်တော့ အသိတစ်ယောက်အိမ်ကိုသွားကြတယ် … အဲ့ဒီကပြန်တော့ ဆင်မလိုက်အဝေးပြေးကားဂိတ်ထဲကနေ (၃၄) ဒိုင်နာကားစီးပြီးပြန်ရင် ကျွန်မအိမ်နားကမှတ်တိုင်ကိုရောက်တယ်လေ… ပြီးတော့ ဂိတ်စဆိုတော့ ထိုင်စရာကလဲရတယ် …. ကိုယ်တွေကလဲ ထမင်းဂျိုင့်ကတစ်ဘက်ဆိုတော့ ထိုင်ရမှ အဆင်ပြေမှာ .. မဟုတ်ရင် ဒိုင်နာကားကသိတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်ကမြန်နဲ့ ဆန်ကောထဲကဇီးဖြူသီးဖြစ်မှာလေ …စပါယ်ယာကတော့ “ဟိုရောက်မယ် … ဒီရောက်မယ်” အော်ပြီး လာသမျှလူတွေကို အတင်းတွန်းထိုးတင်နေတာပဲ … ကျွန်မလဲ တက်ရော ကားလဲမထွက်သေးပဲနဲ့ စပါယ်ယာက နောက်ကကပ်လိုက်လာတယ်လေ … ဘယ်သူတက်တက်မလိုက်လာပဲနဲ့ ကိုယ်တက်မှလိုက်လာတော့ “ငါ့ကိုများ …. ကားခမပေးပဲ အလကားစီးမယ့်သူကျနေတာပဲ ” ဆိုပြီးတော့ ရှက်လဲရှက်၊ စိတ်လည်းနည်းနည်းတိုသွားတာပေါ့ … ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်းလှည့်မကြည့်ပါဘူး … ကျွန်မလှည့်မကြည့်ရင် သူပြန်ဆင်းသွားမယ်ထင်တာပေါ့ … သုံး လေး ငါး လှမ်းလောက်လှမ်းတဲ့ထိ ပြန်မဆင်းတော့ ကျွန်မကလဲ ဘာလဲလို့ မေးမလို့ ရုတ်တရက်ပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့ … အဲ့ဒီတော့ မှ အဖြစ်မှန်ကိုသိတယ် …
ကျွန်မကိုင်တဲ့ စတီးနှစ်ဆင့်ဂျိုင့်ရဲ့ ဂိုင်းက နည်းနည်း အပြင်ကိုကားနေတယ်လေ … အဲ့ဒီ ဂိုင်းက ကျွန်မကားပေါ်စတက်ကတည်းက စပါယ်ယာရဲ့ခပ်တိုတိုပုဆိုး အောက်နားစကို ချိတ်ပြီးသယ်လာမိတာကိုး …. ဟီး …. ကိုယ်ရွှေစပါယ်ယာကလဲ အဲ့ဒါကိုမပြောပဲ သူ့ပုဆိုးလေးကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီး ဒီအတိုင်းလိုက်လာတယ်လေ …. တော်သေးတာပေါ့ ဂျိုင့်ကိုတအားမဆွဲလိုက်မိလို့ … ဆွဲများဆွဲလိုက်လို့ကတော့ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်းတွေဖြစ်တော့မယ် …. ဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့ အားနာလို့တဲ့ … ဟား ဟား ဟား
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:51 AM 13 comments Links to this post
ကျွန်မတို့ရန်ကုန်မှာ လူချမ်းသာတွေကလွဲရင် ကျန်လူတန်းစားတွေက လိုင်းကားကို အဓိကထားကြရတာလူတိုင်းအသိပါ … ဆိုတော့ မိန်းခလေးတွေအတွက် လိုင်းကားစီးရတာ အန္တရာယ်များပါတယ် … ကားပေါ်မှာ အသားယူလိုတဲ့ သကောင့်သားတွေကလဲ အများသားမဟုတ်လား(မြင်ဖူးသလောက်ကတော့ သက်ကြီးပိုင်းတွေများပါတယ်) … တချို့ကလဲ မသိမသာ၊ တချို့ကလဲ သိသိသာသာမို့ ကိုယ့်ဘာသာအဆင်ပြေသလိုလေးကြည့်ရှောင်ကြရပါတယ် … ကျွန်မလဲ လူချမ်းသာတစ်ယောက်မဟုတ်ရလေတော့ လိုင်းကားပဲတိုးစီးရတာပေါ့ရှင် ....
တစ်နေ့မှာ ကျွန်မက (၃၄)ဒတ်ဆန်းကားအပုလေးကိုစီးပြီး မြို့ထဲသွားပါတယ် … အဲ့ဒီကားသေးသေးလေးတွေက တစ်ဘက်ကို လူ(၆)ယောက်ထိုင်စေပါတယ် … မထိုင်ရင် စပါယ်ယာတွေ အပေါက်ဆိုးသံကို နားမခံသာအောင်ကြားရလေ့ရှိတယ် … လူ(၆)ယောက်ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်း တစ်ယောက်က အပြင်နည်းနည်းထွက်နေတယ် … ပြီးတော့ အလယ်ကခုံတွေလဲ ရှိသေးတော့်ထွက်နေတဲ့သူက ဘယ်လိုမှထိုင်ရအဆင်မပြေဘူးပေါ့ … အရပ်ရှည်ရင် သာဆိုးသေး … ကျွန်မကတော့ ကားခေါင်းနဲ့ကပ်လျက် ထိပ်ဆုံးမှာ လွယ်အိတ်လေးပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ခပ်ကုပ်ကုပ်လေးထိုင်နေတာပေါ့ … ကျွန်မဘေးမှာ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ထိုင်တယ် … သူက ဘေးမှာ မိန်းခလေးရှိတော့ အားနာတယ်ထင်ပါရဲ့ ထိုင်တာ ကျံုံ့ကျုံလေးရယ် ဆိုပြီး ကျွန်မက စိတ်ထဲက ချီးကျူးနေတာ … နောက် ကားလဲစထွက်ရော သူက တတွန့်တွန့်ဖြစ်လာရော …. ကားလှုပ်လေ တွန့်လေဆိုတော့ ဒီလူဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြီး မသင်္ကာဖြစ်လာမိတယ် … ပြီးတော့ သူက ကျွန်မကိုလဲ တစ်ခုခုပြောချင်သလိုလို လှမ်းလှမ်းကြည့်တယ်လေ .. ကျွန်မပုံစံကလဲ ၀တုတ်တုတ် ပါးဖောင်းဖောင်းနဲ့ဆိုတော့ အမြဲ အစခံရတော့ ငါ့ကိုများစမလို့လားဆိုပြီး မျက်နှာကိုတင်းထားလိုက်တာပေါ့ … ဟွန်း … ဘယ်ရမလဲ ကြယ်ပြာပဲနော့ ….
နောက်တော့ သူက ကျွန်မကို စကားစပြောပါလေရော …
အစ်ကိုကြီး - “ညီမ … ညီမ”
ကြယ်ပြာ - “ဘာလဲ ….” (စူပုပ်ပုပ်မျက်နှာထားဖြင့်)
သူက နည်းနည်းရှိန်သွားတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ် .. ဒါပေမယ့် ဆက်ပြောတယ် …
အစ်ကိုကြီး - “ ဟိုလေ …. ညီမလေးအိတ်က စူးတယ် .. ”
ကြယ်ပြာ - “ ဟမ် … ဘာစူးတာလဲ … ဘာမှမလုပ်ဘူး ” (ဇဝေဇ၀ါမျက်နှာထားဖြင့်)
အစ်ကိုကြီး - “ဒီမှာလေ ညီမရယ် … ဒီမှာ .. .အစ်ကိုလဲ အောင့်ခံပါသေးတယ် … ခုက နာလွန်းလို့ပါ ” တဲ့ဆိုပြီး ကျွန်မအိတ်နဲ့ သူ့ဒူးခေါင်းထိနေတဲ့ နေရာကို ကိုင်ပြလိုက်မှ ကြယ်ပြာတို့သဘောပေါက်တော့တယ် …
ကျွန်မက အဲ့ဒီနေ့မှ အိတ်ထဲမယ် ထောက်ချွန်ထည့်လာမိတာ … သူ့ခမျာ တော်တော်လေးနာသွားရှာမယ် ….
“အစ်ကိုကြီးရယ် ဆောရီးပါ … ညီမလဲ သတိမထားလိုက်မိလို့ပါ” ဆိုပြီး အားနာနာနဲ့ တောင်းပန်ခဲ့ရတယ် …. ဟီး ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:27 AM 11 comments Links to this post
မေကြီးဒီတစ်ပတ် မျက်စိပြတာ အဆင်ပြေမပြေ သိချင်လို့ ဒီမနက်အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ဖြစ်တယ် … အမေနဲ့ဖုန်းပြောတော့ အမေက
“သမီးရေ … မေကြီးမျက်စိ မြင်တော့မြင်လာရတယ်၊ အရှင်းတော့မမြင်ရဘူး၊ လူတွေကို ကြည့်ရင် ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်တွေပဲမြင်ရတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်က ကောင်းသေးတာပဲ စိတ်မပူနဲ့”
“မေ .. .ဆရာဝန်က ဘာပြောလဲ”
“သွေးကြောပေါက်တာကနေဖြစ်တဲ့ အမာရွတ်တွေက မျက်ကြည်လွှာမှာ ကပ်နေတယ်တဲ့ .. အဲ့ဒါတွေဖယ်ထုတ်ပစ်ရင် မျက်ကြည်လွှာကို ဆွဲဖြဲသလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ ဆရာဝန်ကပြောတယ်”
“အစကပြောတော့ လေဆာသုံးခါပစ်ပြီးရင် ပြန်မြင်မယ်ဆို”
“၀ဋ်ကြွေးပါလို့ပေါ့ သမီးရယ်.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ..”
“မေ … မျက်ကြည်လွှာလဲလို့မရဘူးလား ဟင် …”
“သမီးရယ် မျက်ကြည်လွှာလဲတယ်ဆိုတာ လွယ်တာမှမဟုတ်တာ … လှုတဲ့သူရှိဦးမှ .. မေကြီးတစ်ဘက်မြင်နေရသေးတာပဲ … ဆီးချိုကလဲ ရှိနေတော့ မေကြီးကတော့ မျက်စိမခွဲချင်ဘူး”
“သမီးကတော့ မျက်ကြည်လွှာလဲလို့ရရင် လဲလိုက်စေချင်တယ် …ဆရာဝန်ကို မေးကြည့်ပါလား မေကြီးရယ် ”
“အေး… အေး … မေကြီးကိုနောက်တစ်လခွဲနေရင် လေဆာထပ်ပစ်ဖို့ချိန်းထားသေးတယ် .. အဲ့ဒီကျမေးလိုက်မယ် သမီး”
ပြီးတော့ ဖေကြီးနဲ့ စကားနည်းနည်းပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ဖြစ်တယ် … စိတ်ထဲမှာတော့ အတွေးတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ် ..
မေ မျက်စိမခွဲချင်တာ သမီးသိတယ် … ခွဲရင်ကောင်းသွားမယ်လို့လဲ မေကြီး မယုံကြည်ဘူးလေ … သမီးမေ့မျက်စိကို အကောင်းတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ် … မေ့အသက်က ၅၀ တောင်ပြည့်သေးတာမဟုတ်ဘူး … မေ မသေခင် သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေချိန်လေးမှာတော့ ဘာချွတ်ယွင်းချက်မှ မရှိပဲ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းသွားစေချင်တယ် မေကြီးရယ် … သမီးဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဟင် …. သမီးဘာလုပ်ပေးရမလဲ … မေကြီးကတော့ ဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေမယ့် သမီးစိတ်မကောင်းဘူးမေကြီးရယ် … ဖြစ်နိုင်ရင် သမီးရဲ့မျက်ကြည်လွှာကိုတောင် မေကြီးအတွက်ပေးချင်ပါတယ် … မေကြီးရဲ့နောက်ထပ်မျက်စိတစ်ဘက် ထပ်မထိခိုက်ပါစေနဲ့လို့ သမီး ဆုတောင်းပါတယ် ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:34 PM 14 comments Links to this post
ကျွန်မ ၈ နှစ်သမီးအရွယ်လောက်တုန်းက သူများကိုချောက်ချဖူးတဲ့အမှတ်တရ အဖြစ်လေးပါ … ဘာရယ်မဟုတ် အနည်းငယ်လေးပြုံးဖြစ်ရင်ပဲ ဝေမျှရကျိုးနပ်ပါတယ် …း)
ကျွန်မငယ်ငယ်က အလွန်အဆော့သန်သော ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် … ဟိုးတုန်းက ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေမပေါသေး … ဒီတော့ လူဦးရေလည်းသိပ်မထူထပ်သေးဘူးပေါ့ … ကျွန်မနဲ့အရွယ်မတိမ်းမယိမ်းရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေကို ကျွန်မက ဆရာလုပ်နေကျလေ …. နေ့လည်နေ့ခင်းဆိုရင် လမ်းတကာလှည့်ပြီး ကျွန်မတို့တွေ ဗံဒါသီး ကောက်လေ့ရှိတယ် … ဗံဒါသီးထုစားရတာသိပ်အရသာရှိတာလေ …. များသောအားဖြင့် ကလေးဗိုလ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကသိပ်မကောက်ဘူး … အငယ်တွေကိုပဲကောက်ခိုင်းလေ့ရှိတယ် …စပ်လဲစပ်စုတတ်တဲ့ ကျွန်မက နေကြာစေ့ကို သိပ်ကြိုက်တယ် …. နေကြာပန်းကနေ နေကြာစေ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သိပ်သိချင်တယ် … ကလေးအတွေးနဲ့ဆိုတော့ နေကြာစေ့ကို နေကြာပန်းထဲကနေ ဖြဲရှာရင်တွေ့မှာပဲလို့ ထင်မိတာပေါ့ ….
တစ်နေ့မှာကျွန်မတို့ဘုရားစင်က နေကြာပန်းတွေ စွန့်တော့ အမေကသွားလွှင့်ပစ်ခိုင်းတာကို ကျွန်မကအကြံနဲ့လွှင့်မပစ်ဘူးလေ … လူကြီးတွေလစ်တော့ နေကြာပန်းတွေကို တစ်ပွင့်ချင်း အလယ်ခေါင်ကနေ ဖြဲရှာတာပေါ့ …နေကြာစေ့ကိုမတွေ့ရဘူး … ကျွန်မစိတ်ထဲမကျေနပ်ဘူး … ရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆထားတာကိုး …တွေ့တာက အလယ်အ၀ိုင်းအောက်က အနှစ်လေးတွေကို တွေ့တယ် … အဲ့ဒါကို ကျွန်မက စားကြည့်တော့ စိမ့်စိမ့်လေးအရသာရှိတယ် … ဒီတော့ “အင်း … ဒီကနေ ရင့်ပြီးအခွံ့တွေပေါက်ပြီး နေကြာစေ့ဖြစ်တာနေမယ်” လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ရော ….
အဲ့ဒီနေ့ နေ့လည်လဲရောက်ရော ထုံးစံအတိုင်း ကလေးတွေကို ဦးဆောင်ပြီး ကြယ်ပြာတစ်ယောက် ဗံဒါသီးလှည့်ကောက်တာပေါ့ … ပါးစပ်ကလဲ ကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ နေကြာပန်းအနှစ်အကြောင်း ပြောပြရင်းပေါ့ … အဲ့ဒီထဲမှာ ကျွန်မထက် နှစ်နှစ်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးက သူလဲ စားချင်တယ်လုပ်ပါလေရော … ကျွန်မက “ပန်းတွေကမရှိတော့ဘူး နင်စားချင်ရင် နင့်အိမ်က နေကြာပန်းကပ်တော့မှ စားကြည့်” ဆိုတာကို သူက မရဘူး …. အဲ့လိုပြောရင်းဆိုရင်း လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ လမ်းမှာ သစ်ရွက်ခြောက်တွေပုံထားတဲ့ အမှိုက်ပုံပေါ်မှာ နေကြာပန်းတွေပစ်ထားတာတွေ့ပါလေရော … အဲ့ဒါကို သူက “အစ်မ အစ်မ … သမီး အဲ့ဒါယူစားကြည့်မယ် .. .ရလား” တဲ့ …. ကျွန်မက “ဟယ် … မကောင်းပါဘူး .. အမှိုက်ပုံကြီးမှာ” ဆိုတော့ သူက “သန့်ပါတယ် အစ်မရ” တဲ့ … အဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တာ စိတ်ထဲ အချဉ်ကပေါက်လာတာနဲ့ “စားချင်စားလေ” လို့ပြောလိုက်တော့ အဲ့ကောင်မလေးက ပန်းတွေကို ၀မ်းသာအားရပြေးကောက်ပြီး ကျွန်မပြောသလိုလုပ်စားပါလေရောလား …. ပြီးတော့ သူက “ အစ်မရော … စားလေ” တဲ့ … ကျွန်မက “တော်ပြီ … ဗိုက်တင်းနေလို့ စားတော့ဘူး” လို့ … ဟီး …. သူတစ်ယောက်တည်း အကုန်စားသွားတယ် …. သူငယ်ချင်းတို့ရော နေကြာစေ့စားကြမလားဟင် ?
မှတ်ချက်။ ။ပုံလေးကို http://www.manataka.org ဒီကယူပါတယ်ရှင်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:02 AM 10 comments Links to this post
ကျွန်မချစ်သော ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက ဖုန်းနဲ့တစ်မျိုး၊ မေးလ်နဲ့တစ်ဖုံ၊ အက်စ်အမ်အက်စ်နဲ့တစ်လီ၊ စီဘောက်စ်က တစ်သွယ်နဲ့ ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ အခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့ မေးကြပါတယ် ....
ကျွန်မ ခုတလော အင်တာဗျူးတွေနဲ့ နဘမ်းသတ်နေရလို့ ပို့စ်လဲ ကောင်းကောင်းမတင်နိုင်ပါဘူး … ခုတော့ ကျွန်မရဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေပြီးသွားပြီမို့လို့ အချိန်ရရင် ရသလိုပို့စ်ပြန်တင်ပါတော့မယ် …
ကျွန်မတို့ အလုပ်ကနေ စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်တော့ သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ဘူးလို့ခေါ်ပြောတဲ့နေ့က ကျွန်မစိတ်အတော်ညစ်သွားပါတယ် … ခုချိန်မှာ အလုပ်ပြန်ရှာရတာ တော်တော်လေးခက်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိနေလို့ပါ … နောက်ပြီး အင်တာဗျူးတွေဝင်ရတာ သူများတွေတော့ မသိဘူး ကျွန်မတော့ တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ပါတယ် … အရင်ဆို အလုပ်ရှာရတာ သိပ်မခက်ခဲတဲ့အပြင် အင်တာဗျူးလေး နှစ်ခု သုံးခုဝင်လိုက်တာနဲ့ အလုပ်က ချက်ခြင်းရတတ်ပါတယ် …ခုတော့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ်တွေနဲ့ ၀င်လိုက်ရတဲ့ အင်တာဗျူးတွေဆိုတာ မနည်းပါဘူး … အလုပ်သစ်ကို နှစ်လလောက်ပြန်ရှာလိုက်ရပြီး Last minute မှာ အလုပ်ပြန်ရသွားပါတယ် …Last minute ဆိုတာကလဲ အလုပ်သာပြန်မရခဲ့ရင် ကျွန်မ ဒီနေ့ ရန်ကုန်ပြန်ရတော့မှာပါ …မနေ့က MOM မှာ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းသွားတိုးတာ နှစ်ပတ်ထပ်ရခဲ့ပါတယ် … နောက်အပတ်ထဲ Pass က Approve ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်အပတ်ထဲ အလုပ်စဆင်းရတော့မှာပါ ….
ကျွန်မတွေ့ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ လူတွေ့၊ စက်ဖြေ (သို့) လူတွေ့၊ ရေးဖြေ (သို့) မေးလ်တွေ့၊ ဖုန်းတွေ့၊ လူတွေ့ စသဖြင့်တွေပါပါတယ် … ကျွန်မ မကြိုက်ဆုံးက စာရွက်ပေါ်မှာ Coding တွေချရေးခိုင်းတာပါပဲ … ကျွန်မက Syntax တွေအားလုံးအလွတ်မရတော့ အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ် …
ပထမဆုံးဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီက System Analyst လျှောက်တာကို Java Question တွေဖြေခိုင်းပါတယ် … ကျွန်မက C#.Net နဲ့ပြောင်းဖြေခဲ့ပါတယ် … ကျွန်မကို လူတွေ့မေးမယ့် မန်နေဂျာက အရေးကြီးကိစ္စနဲ့ အပြင်သွားတာ အချိန်မှီပြန်မရောက်လို့ ကျွန်မ လူတွေ့မဖြေခဲ့ရတဲ့အပြင်ဖုန်းပြန်ဆက်ဆိုလို့ ဆက်ပြန်တော့ ကောင်းကောင်းမဖြေပဲ ဖုန်းချသွားပါတယ် …
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ကျွန်မ J2ME ရတယ်ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ခေါ်တာပါ … သူတို့ သုံးတာက Highest Technologies တွေတဲ့ ကျွန်မက အကုန်တော့လဲ ဘယ်သိပါ့မလဲ … သူမေးတဲ့ မေးခွန်းတော်တော်များများကိုမဖြေနိုင်ခဲ့လို့ မရပါဘူး …
သုံးခုမြောက်က ကျွန်မ နှုတ်ဖြေအကုန်ရပြီး ရေးဖြေအကုန်မရခဲ့ပါဘူး ..
လေးခုမြောက်ကကျတော့ သူတို့လိုချင်တာ Analyst Role ကိုနိုင်မယ့်သူ … ကျွန်မက Developer ဘက်ကို အားသန်သူဆိုတော့ မရပြန်ပါဘူး .. အဲ့ဒီမှာတော့ ရေးဖြေဖြေရတယ် .. ကျွန်မ ၈၀% လောက်တော့ဖြေနိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်တာပါပဲ …
မေးခွန်းသုံးမျက်နှာထဲက တစ်ခုက Big Large Objects (BLOBs) ကိုသုံးပြီး Stored Procedure တစ်ခုရေးခိုင်းတာပါ .. အဲ့လိုမျိုး တခါမှမသုံးဖူးတော့ ကျွန်မလဲ ဖြေရမယ့်နေရာမှာ ငါ မသုံးဖူးလို့ မရေးတတ်ဘူး .. ငါ့ကို Help ပေးဖတ်ရင်တော့ ငါကောင်းကောင်းရေးနိုင်ပါတယ်လို့ ရေးခဲ့တယ် … ကျွန်မစိတ်ပေါက်လာရင် အဲ့လိုဖြေဖြေပစ်တယ် …း)
ငါးခုမြောက်ကကျတော့ ကျွန်မစိတ်တို ရတဲ့ အင်တာဗျူးပါ … အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ ကျွန်မမှာ ၁ နာရီခွဲလောက်အိမ်ကကြိုထွက်ရတယ် … ပြီးတော့ ဟိုရောက်တော့ ကျွန်မရှေ့မှာ တစ်ယောက်ကို ဗျူးနေတယ် … ပြီးတော့ ကျွန်မ အလှည့်လဲရောက်ရော ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ပါစင်နယ်နည်းနည်းမေးတယ် .. ပြီးတော့ ကျွန်မကို Business Intelligent သုံးဖူးလားဆိုတော့ ကျွန်မလဲ သုံးဖူးတယ် ပေါ့ .. ပြီးတော့ Analyzing Service ကိုသုံးပြီး Cube ဆောက်ဖူးလားတဲ့ .. ကျွန်မလဲ ဆောက်ဖူးပါတယ်ပေါ့ … ပြီးတော့ အဲ့ဒီ Cube ကို Box ထဲထည့်လားတဲ့ …. ကျွန်မကြောင်သွားတယ် … ဘာမေးပါလိမ့်ပေါ့ .. ငါသိတဲ့ထဲမှာ Cube ကို Box ထဲထည့်တာမပါပါဘူးပေါ့လေ …. ကျွန်မက BI ကို ခဏတာပဲသုံးဖူးတာ အရမ်းအတွင်းကျကျလဲ မသိဘူး .. မသိတာတွေမှအများကြီးရယ် …. ရှိများ ရှိသလားတောင် ထင်သွားတယ် …နောက်တော့ မေးတဲ့သူက ထရယ်ရော … ကျွန်မကို စတာတဲ့ … သူ့ကြည့်တော့ လူကြီးလူကောင်းရုပ်နဲ့ ကျွန်မကိုများ သူစ စရာကျလို့ အဲ့ဒါပြီးတော့ ဘာမှထပ်မမေးတော့ပဲ နောက်ကျရင် ပြန်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုပြီး ပြန်ခိုင်းလိုက်လို့ ကျွန်မ စိတ်တိုပြီး ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အင်တာဗျူးပေါ့ … ပြီးတော့ ပြန်လဲမဆက်သွယ်ပါဘူး …
ခြောက်ခုမြောက်ကကျတော့ ကျွန်မကို အေးဂျင့်က ညွှန်တဲ့လိပ်စာက မှားနေတော့ ကျွန်မမှာ ကာကီဘူကစ်ထဲ ပတ်ချာကိုလည်လို့ ... နောက်ဆုံးတော့ တွေ့ပါတယ် … သို့ပေမယ့် သူကလဲ ကျွန်မ မကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းတွေချည်းပဲမေးလို့ ကျွန်မ သိပ်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး … အဲ့ဒါလဲမရပါဘူး …
ခုနှစ်ခုမြောက်က ကျတော့ ကျွန်မဆီကို မေးလ်နဲ့ မေးခွန်းခြောက်ခု အရင်ဖြေခိုင်းတယ် … အဲ့ဒါကို သဘောကျရင် သူတို့က ဖုန်းအင်တာဗျူးခေါ်မယ်တဲ့ … ကျွန်မဖြေပြီးတော့ သူတို့က သဘောကျလို့ ဖုန်းအင်တာဗျူးခေါ်ပါတယ် … ဖုန်းအင်တာဗျူးမှာ အဆင်ပြေရင် သဘောကျရင် လူတွေ့ခေါ်မယ်တဲ့ …. အိုခေပေါ့ … ကျွန်မ ဖုန်းအင်တာဗျုးဖြေတယ် … နောက်နေ့ချက်ခြင်း လူတွေ့ခေါ်တယ် …. ကျွန်မကတော့ အလုပ်ရတော့မယ်ပေါ့ .. နှစ်ဆင့်အောင်သွားပြီဆိုတော့ … နောက် လူတွေ့မှာလဲ အင်တာဗျူးတဲ့သူက သဘောကျတယ် ဒါပေမယ့် သူက မေလကုန်ကျရင် နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးရှိသတဲ့ …
သူတို့ ကုမ္ပဏီက ဂျာမနီဘေ့စ်ဆိုတော့ ဟိုက ဂျာမန်တွေက Technical ထပ်ဗျူးပါမယ်တဲ့ … ဆိုတော့ ခုထိ Pending ကြီးနဲ့ဒီအတိုင်းကျန်နေတယ် …
ရှစ်ခုမြောက်က အင်တာဗျူးကတော့ ကျွန်မအားအရဆုံးတစ်ခုပါ …မေးခွန်းပေါင်း ၁၁ ခုရယ် Test Plan တစ်ခုရယ် ရေးခိုင်းတာပါ … ကျွန်မ အကုန်လုံးမှန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ် … နောက်ဆုံးတော့ အေးဂျင့်က ကွန်ဖန်းပဲစောင့်နေတာ အိုခေတယ်ပြောပြီး နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ထပ်ထည့်ထားသေးတယ်တဲ့ … လစာအဆင်ပြေတဲ့သူယူမယ်ပြောပြီး ကျွန်မကျန်ခဲ့ပါတယ် …
ကိုးခုမြောက်ကတော့ Monster မှာတင်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ Resume ကို တွေ့လို့တဲ့ လာဆက်သွယ်တာပါ … ကျွန်မက .Net သမား … တကယ်လဲသွားရော Coldfusion ရယ် အက်ဆေးအတိုနှစ်ပုဒ်ရယ် ဖြေရမယ်တဲ့ … ကျွန်မက ဒေါ့နက်အတွက်လျှောက်တာဆိုတော့ သူတို့က ဒေါ့နက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ… ကျွန်မက ထိုင်ရမလို ထရမလိုနဲ့ ပြန်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတုန်း ကျွန်မကို စာမေးပွဲဖြေသွားပါ လုပ်ရော … ဒီတော့ ကျွန်မလဲ မထူးဘူးဆိုပြီး Coldfusion ၈ ပုဒ်လောက်ကို C# နဲ့ဖြေခဲ့လိုက်တယ် … ပြီးတော့ Analyst Questions သုံးမျက်နှာစာကို Viva ဖြေခဲ့ရတယ် .....
ဆယ်ခုမြောက်ကလဲ ကိုယ်ကနည်းနည်းသိရင် သူတို့က နက်နက်ဆင်းမေးတယ် … နောက်တော့ ဖြေရမှာတောင် ကြောက်လာတာနဲ့ မသိရင် မသိဘူးပဲ ပြောလိုက်တော့တယ် .. အဲ့ဒီတော့ မရဘူးပေါ့ ဟဲ ဟဲ …
ဆယ့်တစ်ခုမြောက်ကတော့ ကျွန်မရသွားတဲ့အလုပ်ပါ … Technical Questions တွေကို ဖုန်းနဲ့ဗျူးပါတယ် … ကျွန်မမှာ ကွန်ပျူတာရှေ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ဂူတောင်မဂယ်နိုင်အောင် ဆက်တိုက်မေးပါတယ် … နာရီဝက်တိတိပါ … အဲ့ဒါ အောင်သွားတော့ နောက်နေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ်ကို နောက်တစ်ယောက်က နာရီဝက်တိတိပါပဲ ဖုန်းနဲ့ဗျူးပြန်ပါတယ် …အဲ့ဒါအောင်သွားပြန်ပါတယ် … နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လူတွေ့ခေါ်ပါတယ် … စာအနည်းငယ်မေးတယ် .. နောက်တော့ ဖိအားများရင်လုပ်နိုင်သလား … အိုတီဆင်းနိုင်လား … တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် လုပ်နိုင်လား .. အဖွဲ့နဲ့ရောလုပ်နိုင်သလား .. စသဖြင့် ပုံမှန် အင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ပြီးသကာလ အလုပ်ရသွားပါတယ် …
ကျွန်မ၀င်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက Hutcabb, Phillip Securities, Lanworks , NLB, SingHealth, ADC Technologies, Invers Asia, Chartered Semiconductor, Recruitment Asia Pacific Regional Office, Hewlett Packard, STATS Chip PAC တို့ဖြစ်ပါတယ် ..
ကျွန်မ၀င်ခဲ့ဘူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အင်တာဗျူးတွေရခဲ့ရင် ကြိုပြီးပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မကိုပြောပါ .. ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် အကုန်ပြန်ပြောပြပါမယ် … ဘာလို့ဒီလိုပြောသလဲဆိုတော့ အင်တာဗျူးတွေဆိုတာ တချို့အတွက် သိပ်လွယ်ကူတတ်ပေမယ့် တချို့တွေအတွက်သိပ်ခက်ခဲတတ်ပါတယ် .. အသိရှိရင် ရှိသလိုလဲ အလုပ်ရသွားတတ်ပါတယ် … ကျွန်မလို အသိမရှိ၊ စာပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်သောသူများ ကျွန်မလို စိတ်မညစ်ရအောင် ကျွန်မ ပြန်မျှဝေချင်တဲ့သဘောပါ … အားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင် ….
Posted by ကြယ်ပြာ at 3:25 AM 15 comments Links to this post
ရိုးသားစွာ ကြဲချလိုက်မိတာပါ ….
ချစ်ခြင်းရဲ့ အရိပ်တွေပဲရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ ….
ငါ့နှလုံးသားကို ချခင်း မင်းနင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်
ငါ့နှလုံးသွေးနဲ့ ပန်းတစ်ခင်းဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါတယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:06 AM 12 comments Links to this post
တခါတုန်းက မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ရှိတယ်တဲ့ …. အဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးကို ပိုင်ရှင်တွေက သေချာမပြုမပြင်ထားတော့ သူ့ခမျာ ခြံစည်းရိုးလေးတွေလဲ ပျက်၊ အနီးအနားက လူတွေကလဲ ဖြတ်လမ်းလိုသဘောထားပြီး ဖြတ်ကြ သွားကြ လာကြနဲ့ပေါ့ ၊ ကြက်တွေ ငှက်တွေကလဲ သူတို့ အစာရှာရာနေရာလို သဘောထားပြီး မြေကွက်လေးအပေါ် ထင်တိုင်းကြဲနေကြတယ်တဲ့ …. ဒီတော့ မြေကွက်လေးက “ငါဟာ လောကကြီးအတွက် ဘာမှ အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့အရာ တစ်ခုပါလား” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသတဲ့လေ ….
တစ်နေ့မှာတော့ မြေကွက်ကလေးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေက မြေကွက်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ခြံလုပ်သားကြီးတစ်ယောက်လက်ကို အပ်လိုက်သတဲ့ …. လုပ်သားကြီးက ခြံစည်းရိုးလေးကို ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့လေးပြင်ကာပြီး မြေကွက်လေးကို မြေဆီ မြေသြဇာပြည့်တဲ့ မြေကွက်လေးတစ်ကွက်ဖြစ်အောင် စတင်ဖန်တီးပါလေရောတဲ့ … မြေကွက်ကလေးကတော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ဘာပင်လေးတွေများစိုက်မလဲဆိုပြီး ရင်ခုန်မျှော်လင့်နေတာပေါ့ … အဲ့လို လုပ်သားကြီးက ပြုပြင်ပြီးတဲ့နောက် မြေကွက်လေးပေါ်မှာ ပန်းပျိုးပင်လေးတွေစိုက်သတဲ့ … မြေကွက်လေးကတော့ ပျော်နေရှာတာပေါ့လေ … ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်လဲ ချလိုက်သတဲ့ .. သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်က သူချစ်တဲ့ ပျိုးပင်လေးတွေ အကောင်းဆုံးရှင်သန်ဖူးပွင့် နိုင်ဖို့ သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့ ….
ဒီလိုနဲ့ပဲ မြေကြီးကသူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း ပန်းပင်လေးတွေ အမြစ်ခိုင်မာစေဖို့၊ အာဟာရပြည့်စေဖို့ သူ့မှာရှိတဲ့ အစွမ်းတွေနဲ့ ပံ့ပိုးလိုက်တာ ပန်းပင်လေးတွေမှာ လှပတဲ့ရောင်စုံအပွင့်လေးတွေ ငွားငွားစွင့်စွင့်၊ ရနံ့လေးတွေကလဲ သင်းထုံလို့ ဖူးပွင့်လာလိုက်ကြတာ မြေကွက်လေးမှာ ပျော်လွန်းလို့ နေစရာနေရာတောင်မရှိသလို ခံစားရသတဲ့ … ပန်းပွင့်လေးတွေကလဲ မြေကွက်လေးရဲ့ သူတို့အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်စေတနာကိုသိလေတော့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဝတ်မှုံလေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ပွင့်ဖတ်လေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့အရွက်လေးတွေကို မြေကွက်လေးပေါ် ခြွေချပေးကြတယ်လေ ….သူတို့တစ်ပင်လုံး လဲဖြိုချပေးဖို့ကျတော့လဲ မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးလေ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ အလုပ်က အကောင်းဆုံးဖူးပွင့်ပြီး ကောင်းကင်ကြီးကို မျှော်ကြည့်ဖို့မဟုတ်လား ….
မြေကွက်လေးကတော့ ပန်းပင်လေးတွေဆီက ဘာဆိုဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး … သူ့စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုတာနဲ့တင်ကျေနပ်ရောင့်ရဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာ ပန်းပင်လေးတွေလဲ ရိပ်မိမယ်ထင်ပါတယ် … သူတို့ခြွေချပေးတဲ့ အရာလေးတွေကနေ မြေသြဇာပြန်လုပ်ပြီး အပင်လေးတွေ ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ပဲ သူစိတ်ဝင်စားသတဲ့လေ … အပင်လေးတွေ ပျော်နေမယ်ဆိုရင်ကိုပဲ လောကကြီးမှာ အကြီးမြတ်ဆုံး အရာတစ်ခုလိုမျိုး သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူကျေနပ်နေသတဲ့ …. မြေကွက်လေးက ခြံလုပ်သားကြီးကို ခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်တဲ့ “လုပ်သားကြီးခင်ဗျာ … ခင်ဗျားကြောင့် ကျုပ်ချစ်တဲ့ပန်းပင်လေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖူးပွင့်ဝေဆာနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့လို့ ကျုပ်က ခင်ဗျားကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …” တဲ့ ….
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ …. လောကကြီးမှာရော ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ပဲ သူပျော်ရွှင်ဖို့လုပ်ပေးနေရတာနဲ့တင် ကျေနပ်နေတတ်တဲ့ မြေကွက်လေးလို လူတွေရှိမယ်လို့ထင်ကြလားဟင် ??????
မှတ်ချက်။ ။ပုံလေးကို www.earthfriendlybouquets.com ကယူပါတယ် ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:43 AM9comments Links to this post